China Welded reza waya pajira riya Diamond razor pajira riya fenzi vagadziri uye bhizimisi | Xinpan
Welded reza waya pajira riya
Iyo fomati nyowani yechisvo chakabvarurwa waya pajira rekuchengetedza, iine unoshanda blade uye chimiro chinoratidzika kunge chakanakisa.Iinogona kushandiswa kune yekuchengetedza mambure efenzi, madhoo nemahwindo uye zvakare inogona kushandiswa muchiuto. sekuda kwevatengi.
Izvo zvakanakira reza mesh chengetedzo fenzi:
Zvinenge zvisingaite kukwira.
Yakakwira-simba simbi simbi yakaoma kwazvo kudimbura.
Yakasimba yekuchengetedza fenzi zvipingamupinyi zvakashambidzika chitarisiko.
Hapana kushandiswa kwechipiri, saka haazobiwa.
Zviri nyore kuisa.
1. Zvinenge zvisingaite kukwira.
2.High-simba reza mesh yakaoma kwazvo kudambura.
3.Powerful chengetedzo zvipingamupinyi zvipingamupinyi zvakashambidzika chitarisiko.
Welded reza waya pajira riya chinhu chakawanda-chinoshanda, chakakwirira chengetedzo mesh fenzi yakagadzirwa neyakajeka-blade netting yakasungwa pamwe chete, kurongedza mune fomu yekufambisa. Welded Razor Wire Mesh inoshandiswa mukuvhiya kugadzira munda mushure mekumisikidzwa kwe blade chipingamupinyi. Ichi chigadzirwa chinogona kukuchengetedza iwe nepfuma yako, uye kunoona kuchengetedzwa kwezvidziviriro zvinodzivirira.
Inoshandiswawo nechero muchiuto, mumajeri, dzimba dzevasungwa, zvivakwa zvehurumende nedzimwe nzvimbo dzekuchengetedza nyika; iyo inoshandiswawo sefenzi yekamba uye fenzi yenzanga, uye zvimwe zvivakwa zvakavanzika
Pashure: Stainless simbi reza waya 304 zvinhu 500 dhayamita
Zvadaro: Flat kuputira reza waya 15m pane roll 10 m pa roll
2.5 mm chikuru waya kaviri strand 4 pfungwa inopisa Dip ...
Chinguvana fenzi kuvaka fenzi inotakurika fen ...
Stainless simbi reza waya 304 zvinhu 500 dia ...